တစ်နှစ်အတွင်း တိုးမြင့်လာတဲ့ MITSUBISHI MOTORS ရဲ့ရောင်းအားအခြေအနေ! – AutoMyanmar
Mitsubishi Motor North America (MMNA) အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ ၂၀၁၇ အတွင်းရရှိခဲ့တဲ့ ရောင်းအားရလဒ်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းအငယ်ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ တစ်နှစ်လုံးရဲ့ Mitsubishi ရဲ့ရောင်းအားစုစုပေါင်းကတော့ ၁၀၃၆၈၆ အထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်နဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် ၇.၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်ကစပြီး vehicle ပေါင်း ၁ သိန်းကျော်အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဟာပထမဉီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဒီဇင်ဘာလတစ်လရဲ့ရောင်းအားဟာ ၈၅၀၁ အထိရှိနေပြီး အရင်နှစ် ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလနဲ့ယှဉ်ရင် ၁၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရောင်းအားတွေကအရင်နှစ်ကထက်သိသိသာသာတိုးတက်လာတာကြောင့် MITSUBISHI အတွက်တော့ စိတ်ကျေနပ်စရာပါပဲ။
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလရဲ့ ရောင်းအား ၈၅၀၁ ထဲမှာရောင်းအားအကောင်းခဲ့ဆုံး vehicle ကတော့ Mitsubishi ရဲ့ adventurous Outlander Sport ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Outlander Sport ရဲ့ရောင်းအားဟာဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ၃၆၇၈ အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလရဲ့ရောင်းအားက ၃၀၁၈ အထိရှိခဲ့တာကြောင့် ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆို ၄၇.၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာကိုတွေ့ရမှာပါ။
“2017 wasaremarkable year for Mitsubishi as we continued our rebuilding effort and posted another year of sales growth. In just five years, Mitsubishi sales have increased nearly 80 percent, and we’re doing that with fleet sales that are lower than industry average,” said Don Swearingen, executive vice president and chief operating officer, MMNA.
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ ရောင်းအားရလဒ်အတွက်ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ့်အကြောင်းကို Don Swearingen ဆိုသူကပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Don Swearingen ဆိုသူကတော့ Mitsubishi Motor North America (MMNA) ရဲ့ Executive vice president နဲ့ Chief operating officer တစ်ဉီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ မှာရောင်းချနိုင်မှုရလဒ်တွေကိုကြည့်ရင်၂၀၁၇ ဟာ MITSUBISHI ရဲ့အရှိန်တော်တော်ကောင်းနေတဲ့နှစ်ပါ။ MITSUBISHI အနေနဲ့ ၂၀၁၈ မှာလည်း ဒီလိုအရှိန်လေးနဲ့ဆက်ပြီး ရောင်းအားတွေမြင့်တက်လာရင် အောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာရရှိလာမှာတော့အသေအချာပါပဲ။